Guardiola Oo Fariin Qiiro Badan U Diray Iniesta, Kadib Markii Uu Ku Dhawaaqay Inuu Ka Tagayo Barcelona – Gool FM
(Man City) 27 Abriil 2018 Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Andres Iniesta ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda reer Catalan ka dib dhamaadkii xilli ciyaareedkan.
Waxaa xiliyadii lasoo dhaafay laga sugayay Andres Iniesta inuu ka tagayo kooxda kooxda Barcelona, kadib markii ay lasoo saxiixatay xidiga xulka qaranka Brazil Philippe Coutinho suuqii bisha January ee lasoo dhaafay.
33 jirkan ayaa sheegay inuusan ka ciyaari doonin qaarad weynta yurub ka dib ka tagistiisa kooxda Barcelona, si aysan u kulmin saaxiibadiis, taasoo la micno ah inuu ku dhow yahay inuu u dhaqaaqo horyaalka Shiinaha xagaaga soo aadan.
Pep Guardiola ayaa u diray ciyaaryahankiisii hore, kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Barcelona wuxuuna yiri: “Wxaa suuragal ah inay igu qaadato 3 daqiiqo oo aan kaga hadli karo qiimaha Iniesta ee kubada cagta aduunka, kaliya maahan Barcelona”.
“Sanadihii ugu danbeeyay suurtagal ma noqon lahayn isaga la’aan, wuxuu iga caawiyay inaan u fahmo kubada cagta, sida ugu fiican, marka aan daawaday qaabka uu u ciyaarayo”.
“Waxa uu ka sameenayo gudaha garoonka, iyo sidoo kale waxa uu ku guuleystay, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah sida uu u ciyaaray xili kasta, waan kaaga mahad celinayaa, waxaana kuu rajeenayaa mustaqbal wanaagsan”.
QORMADA JIMCAHA: Xog kaa Qarsooneyd oo ku aadan Xulkeena Qaranka Soomaaliya....(Ma ogtahay in.......?????)
"Haddii uu Alle idmo aniga iyo Neymar Real Madrid ayaan ka wada ciyaari doonaa"!!